प्रचण्डको गुनासो : मलाई परिबन्दमा पारेर शीतलनिवास पुर्‍याइयो ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/प्रचण्डको गुनासो : मलाई परिबन्दमा पारेर शीतलनिवास पुर्‍याइयो !
प्रचण्डको गुनासो : मलाई परिबन्दमा पारेर शीतलनिवास पुर्‍याइयो !
४ साउन, काठमाडौं । पूर्वएमालेतर्फका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुले शनिबार बिहानै प्रचण्डसँग भेट गर्ने समय मागेका थिए । तर, प्रचण्डले आइतबार बिहान ९ बजे खुमलटार आउने गरी समय दिए ।
शनिबार रातभरिमा पार्टीभित्रको परिस्थिति नाटकीय रुपमा बदलियो । मंसिरमा महाधिवेशन गराउने गरी शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच चोचोमोचो मिलिसकेको सन्देश बाहिरियो । र, सोही रात शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर केपी ओली, प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माबीच थप छलफल भएपछि प्रचण्ड र ओली मिलेकै हुन् भन्ने थप सन्देश गयो ।पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली भीम रावल, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, भीम आचार्य, लगायतका नेताहरु आइतबार बिहान खुमलटारमा पुग्दा त्यहाँ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरु भेला भइसकेका थिए ।
Breaking News : लाखौं पुगेको सुनको मुल्य, आज बिहिवार सोच्नै नसकिने गरि यस्तो भयो !